विज्ञान/प्रविधी – Page3– Bihani Online
बाथरुमभित्र भएको थियो एटीएमको परिकल्पना, यसरी सुरु भयो एटीम
३ मंसिर २०७३ ०२:१६ November 18, 2016 bihani
एजेन्सी,मंसिर ३ बैंक तथा वित्तिय संस्थाको परिभाषा नै बदलिदिने अटोमेटेड टेलर मेसिन अथवा एटीएम अहिले तपाई हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ ।तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एटीएम नहुँदा बैंकिङ कारोबार कति झन्झटिलो हुन्थ्यो होला ? पछाडि किन फर्कनु ? अगाडि नै जाऔं । किनकी अहिले हामीसँग एटीएम छ । बैंकिङ कारोबार पनि सजिलो छ […]
फेसबुकका सीइओ जुकरबर्गकै अकाउण्ट ह्याक ।
४ आश्विन २०७३ ०२:२६ September 20, 2016 bihani
केही दिन अघि फेसबुकका सीइओ मार्क जुकरबर्गको ट्विटर ह्याण्डल र पीनरेस्ट अकाउन्टको ह्याक भएको हो । ‘अवर माइन टीम’ नामक ह्याकर समूहले जुकरबर्गको सामाजिक सञ्जालको अकाउण्ट ह्याक गरेकाे दावी गरेको थियो । यो समूहले कसरी जुकरबर्गको अकाउण्ट माथि पहुँच पुर्यायो भनेर चाहिँ रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छैन । ‘अवर माइन टिम’ले यो दावी गरेको छ कि केही हप्ता […]
के तपाईंलाई थाहा छ कलमको बिर्कोको टुप्पोमा ‘प्वाल’ हुने कारण
४ आश्विन २०७३ ०२:२२ September 20, 2016 bihani
जुनकुनै युगमा पनि पेनको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुने गरेको पाइन्छ । तर, अहिले कम्प्युटरले यसको प्रयोग बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । तर तपाईले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, प्रायः पेनको बिर्कोमा अर्थात् टुप्पोमा एउटा प्वाल किन हुन्छ ? एक अवधारणाअनुसार, कलमको रिफिलको मसी नसुकोस् भन्नाको लागि पेनको टुप्पोमा प्वाल राखिने प्रचलन रहेको छ । तर यो […]
अंध्यारोमा मोबाइल चलाउँदा आँखाको ज्योति गुम्ला .
१ आश्विन २०७३ १०:०५ September 17, 2016 bihani
एजेन्सी । यदि तपाईं पनि राती अँध्यारोमा लामो समयसम्म एक टकले स्मार्टफोन चलाउने गर्नुहुन्छ भने होसियार ! किनकी यस्तो बानीले एकदिन तपाईंको आँखाको ज्योति गुम्न सक्छ । npr.org को रिपोर्ट अनुसार इंग्ल्याण्डमा २२ वर्षीया एक युवतीको राती अबेरसम्म अंध्यारोमा स्मार्टफोन चलाउने बानी थियो । उनी बेडरुममा पुगेपछि कोठाको बत्ति निभाएर बिस्तारामा पल्टिन्थिन्, अनि मोबाइल चलाउन थाल्थिन् । प्रतिकात्मक […]
तपाईलाई थाहा छ १ सेकेण्डमा इन्टरनेटमा के के हुन्छ भनेर ?
१ आश्विन २०७३ १०:०१ September 17, 2016 bihani
इन्टरनेट मानिसको अभिन्न अंग बनेको छ । विश्वभर करीव ४६.१ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् ३ अर्व ४ करोड मानिसहरु कुनै कुनै रुपमा इन्टरनेटसँग जोडिएका छन् । यी मानिसले एक सेकेण्डमा इन्टरनेट मार्फत धेरै क्रियाकलाप गरिरहेका हुन्छन् । एक सेकेण्डमा इन्टरनेटमा के के हुन्छ त ? इन्टरनेट एकदमै व्यस्त प्ल्याटफर्म हो जहाँ हरेक क्षण करोडौ मानिसहरु इमेल, फेसबुक, […]
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए रहस्यस् यसकारण सूर्यतर्फ नै घुम्छ सूर्यमुखी
१ आश्विन २०७३ ०९:५८ September 17, 2016 bihani
एजेन्सी । तपाइँले पनि सूर्यमुखी फूल त देख्नु नै भएको होला । यो फूल बिहान सूर्य उदाउँदा पूर्वतर्फ फर्किएको हुन्छ । त्यसपछि दिनभरी सूर्यलाई पछ्याइरहन्छ । साँझ सूर्य पश्चिमतिर पुग्दा सूर्यमुखी फूल पनि पश्चिम नै फर्किएको हुन्छ । जब सूर्यास्त हुन्छ, तब यसले पूर्वतर्फ फर्किएर अघिल्लो दिनको सूर्योदयलाई पर्खिन्छ । सायद यही कारण यस फूलको नाम […]
‘एट् द रेट अफ’ (@)को इतिहासस् यसरी राज गर्न थाल्यो इन्टरनेटको दुनियामा
१ आश्विन २०७३ ०९:५६ September 17, 2016 bihani
तपाईं पनि इमेल-इन्टरनेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने @ लाई अवश्य चिन्नुहुन्छ होला । इमेल आदान-प्रदानमा त यसको प्रयोग अनिवार्य छ नै, फेसबुक-ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गर्न पनि यसलाई हामीले प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था छ । इमेल-इन्टरनेटको युगमा यस चिह्नको महत्व त निकै नै छ । तर के तपाईंलाई यसको इतिहास थाहा छ ? सायद धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । आउनुस् आज यसको […]
आकाशमा उड्ने भयो फेसबुकको ड्रोन, प्रयोगकर्तालाई गज्जबको सुविधा
१ आश्विन २०७३ ०९:५३ September 17, 2016 bihani
एजेन्सी । फेसबुकले दावी गरेको छ कि उसले सोलार पावर ड्रोन एक्विलाको सफल परीक्षण गरेको छ । यसको मद्दतले फेसबुकले संसारभर इन्टरनेट कनेक्टिभिटी बढाउन सक्नेछ । फेसबुकका अनुसार सो ड्रोन २८ जुनका दिन १००० फिटको उचाइमा ९६ मिनेटसम्म उडाइएको थियो । यसका मालिक मार्क जुकरबर्ग स्वयमले एक पोष्टको माध्यमाबाट यस्तो जानकारी दिएका हुन् । के […]
संसारलाई नै हल्लाइदिने यी १० व्यक्ति र विचार
१ आश्विन २०७३ ०९:५१ September 17, 2016 bihani
मानव इतिहासमा कैयौं घटनाहरु घटेका छन् र हरेक घटनापछाडि कुनै कुनै विचार वा दर्शन रहेको पाइन्छ । चाहे प्राचीन सभ्यतामा होस् चाहे आधुनिक सभ्यतामा होस् विचार वा दर्शनले मानव समाजलाई अगाडि बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ । त्यसैले यहाँ हामी समाज तथा इतिहासको बाटो नै परिवर्तन गर्ने १० विचारबारे चर्चा गर्न गइरहेका छौं । १. […]
गुगलबारे अनौठा चार तथ्य जान्नुस्, साँच्चै तपाइँ अचम्मित हुनुहुनेछ
१ आश्विन २०७३ ०९:४८ September 17, 2016 bihani
एजेन्सी । गुगललाई इन्टरनेटको दुनियाको बादशाह भनिन्छ । सर्चइन्जिनका रुपमामात्रै होइन अन्य विभिन्न अवतार (यूट्यूव, ब्लग) मा पनि गुगलको छुट्टै पहिचान छ । इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका हरेक व्यक्ति दैनिक कुनै न कुनै प्रयोजनका लागि गुगलसँग जोडिने गरेका छन् । तपाईं पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि गुगलको उपयोग दैनिक गर्नुहुन्छ । तर, यही लोकप्रिय गुगलबारेका केही रोचक […]
१अजोड इन्स्योरेन्सको शाखा नेपालगन्जमा बिस्तार
२नेपालमा पछिल्लो विनाशकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष पूरा,
३पुरुष फुटबलको स्वर्ण पदक त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई
४राष्ट्रिय पौडिमा आर्मिकी गौरिका सिंहले जितिन ७ राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित १२ स्वर्ण पदक
५आइटम बमले सारा नेपाल हल्लाएपछि
१चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुले गरे डा- ललितेन्दु जेनाको श्रद्धाञ्जली सभा
२श्रीलंकामा आतंकवादी आक्रमणः मारिनेको संख्या १३७ पुग्यो
३नेपालगन्ज ग्यालरीको आयोजनामा बैशाख १० गते मोटिभेसन सेमिनार हुँदै
४सहभोजपछि नरैनापुरका दलितहरु उत्साहित
५गोकुल सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा प्यानलसहित बिजय बिजयी
१२ बैशाख २०७६ २०:३० April 25, 2019 Deependra Saru
नेपालमा पछिल्लो विनाशकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष पूरा,
१२ बैशाख २०७६ १०:०४ April 25, 2019 bihani
पुरुष फुटबलको स्वर्ण पदक त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई
११ बैशाख २०७६ २१:३० April 24, 2019 Deependra Saru
राष्ट्रिय पौडिमा आर्मिकी गौरिका सिंहले जितिन ७ राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित १२ स्वर्ण पदक
११ बैशाख २०७६ २१:१९ April 24, 2019 Deependra Saru